Kedu otu esi eme atụmatụ dị ka Brian Dean, Backlinko SEO onye mmepụta ngwá ọrụ?
Dika ntule nyocha njuputa nyocha niile isi ihe nchọgharị weebụ, karia ederede ihe di n'ime, choro iweputa ihe di n'ime oge. Otú ọ dị, gịnị bụ usoro ọkọlọtọ maka ederede ọdịnaya? N'eziokwu, enweghi echiche dị otú a dị ka ụda ma ọ bụ oge dị mma n'ihi na ihe niile na-adabere na niche ụlọ ọrụ gị, ihe mgbaru ọsọ gị, na ndị na-ege gị ntị. N'ezie, ọ ga-abara gị uru ikwusa ọdịnaya ọ bụla oge ị nwere ihe ị ga-akọrọ ndị mmadụ. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịdị njikere na n'ọnọdụ a, ọdịnaya gị agaghị enwe ekele dị ukwuu na ngwa ngwa ngwa ngwa.
N'isiokwu a, m ga-eso gị chee echiche banyere isiokwu a ma gosipụta ihe mere "atụmatụ dị ntakịrị karịa" dị mma maka nkwado ahịa gị.
Ị nwere ike inweta ọtụtụ mmasị na mbak, na-enweta njikọ ndị ọzọ na-adọta ma na-adọta ihe ndị ọzọ a na-etinye n'ọrụ okporo ụzọ maka "obere ihe". Brian Dean, onye nwe azụ azụ nke Backlinko SEO, ejirila atụmatụ ya mee ihe dị ukwuu. O bipụtawo ọnụọgụ abụọ nke SEO posts n'ime afọ ole na ole gara aga. All posts a emewo ka otutu uzo ezubere iche n'ile ya anya ma mee ya otu n'ime ihe ndi ozo kachasi ike na weebụ. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ya ruru 3,000 mbak na ihe karịrị narị abụọ njikọ sitere na ihe ndị dị mkpa ma nwee ikikere. Yabụ, dịka ị pụrụ ịhụ, azụ azụ azụ azụ azụ azụ azụ azụ azụ azụ na azụ azụ bụ "less is more" content approach.
"Ntakịrị ihe ndị ọzọ" atụmatụ
Usoro ntinye ihe na-eme ka ọ bụrụ naanị ihe dị mkpa na-eme nchọpụta.Ịkwesịrị itinye ndị ọrụ na ụdị ọdịnaya a ma debe ha anya ruo mgbe ị ga-esote. Ọ na-enyere gị aka ịmepụta ndị na-ege ntị site na igosipụta ọrụ gị na aha gị.
Usoro a dị mfe, ma ọ bụ ihe okike chọrọ:
Ọdịiche dị elu, ihe pụrụ iche site na nchọpụta na ọmụmụ ihe;
Ihe omuma zuru ezu gụnyere nkwado;
akwukwo odide ogologo;
akwukwo ihe omumu;
Na-elekwasị anya na ntinye na nkwalite.
"Mbelata karịa" atụmatụ zuru ezu maka ndị webmasters ndị na-ekwupụta àgwà nke ọdịnaya ha na-ebipụta kama ịba ụba. Nnyocha na ịmepụta ọdịnaya dị elu otu ugboro n'ọnwa nwere ike iwepụtakwu oge na mgbalị karịa ịdepụta ọtụtụ posts kwa izu.
Ụzọ a adịghị adaba maka ihe niile weebụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị ihe ezi uche na-eji maka ntụrụndụ ma ọ bụ blogs agụmakwụkwọ ma ọ bụ mgbasa ozi ọha na eze dị ka ntanetị a na-achọ akwụkwọ ndị ọzọ.
Dị ka a kpọtụrụ m tupu ihe atụ kachasị mma nke atụmatụ "ihe na-abaghị uru karịa" bụ akwụkwọ Brian Dean na webatara na Backlinko SEO.Ọ na-emepụta ihe ndị ọ na-eme na nyocha ọ bụla n'ime izu anọ ọ bụla. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ọdịnaya a na-enweghi ọdịnaya, ndị ọrụ na-atụ anya ihe ọhụrụ ya.
Nkọwapụta na-egosi na Brian Dean nwere nchịkọta mbipụta bụ nsonaazụ dịka nkezi na oke nza maka ọkwa 53 niile dị oke elu. Onu ogugu nke onu ogugu di 2,490, nke di n'etiti ha di 1,280. Ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ nke njikọ ndị na-ejikọta ihe dị iche iche bụ ihe ijuanya - 275 kwa post na 175 kwa etiti. Ihe niile ọ na-eme na mgbagwoju anya a dọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 4 nde na ndị na-ekiri peeji nke 11. Ọ na-egosi otú otu ụzọ dị mma maka mgbasa ozi ahịa bara uru nwere ike isi gbanwee ọnụọgụ weebụ yana bulie ikike weebụsaịtị na ahịa dijitalụ Source .